Kenya oo 10 maalin u qabatay ragga uga jira Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kenya oo 10 maalin u qabatay ragga uga jira Alshabaab
A warsame 15 April 2015 15 April 2015
Mareeg.com: Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay cafis u fidineyso dhallinyarada dalkeeda u dhshay ee ku biiray Al-shabaab, haddii 10 maalin gudahood ay isugu soo dhiibaan dowladda.
Wasiirka amniga gudaha ee Kenya, Joseph Nkaissery ayaa sheegay in dhallinyaradan ay iska soo xaadirin karaan ama ay wargelin karaan xafiisyada dowladda ee Nairobi, Mombasa ama Garissa.
Joseph Nkaissery ayaa tilmaamay in dowladda ay ugu baaqeyso dhammaan shaqsiyaadka aaday Soomaaliya oo ku soo tababartay ay joojiyaan wadashaqeynta Al-shabaab ayna iska xaadiriyaan xafiisyada dowladda.
Waxa uu Joseph Nkaissery xaqiijiyay in ay damaanad qaadayaan cafinta dadkaas, wuxuuna dhanka kale tilmaamay in dadka ku guuldareysta inay ka faa’ideystaan cafintan loo arki doono dembiilayaal, sharcigana lala tiigsan doono.
Wasiir Joseph Nkaissery ayaa u sheegay waalidiinta aruurtooda la waayay ee loo maleynayo in la xagjireeyay ama lagu dilay Soomaaliya ay wargeliyaan xafiisyada dowladda ee Nairobi, Mombassa iyo Garissa.
Waalidkii cunugiisu Soomaalida Shabaab u aaday ee aan wargelin dowladda ayuu wasiir Joseph Nkaissery ugu hanjabay in loo qaadanaayo inuu qeyb ka yahay wax uu ugu yeeray argagixiso.
Go’aanka dowladda Kenya ayaa yimid kadib markii Alshabaab weerar ay ku qaadeen Jaamacadda Gaarisa ay ku dhintay 148 ruux oo u badnaa arday, waxaana dadkii weerarkaas qaaday ka mid ah wiil Somali Kenya oo Nairobi Jaamacadda Sharciga uga baxay.
Taliyaaniga: 400 Muhaajiriin ah oo badda ku dhintay
Hargeysa: Booliska oo qabtay 82 shay oo hub fudud ah